बिहिवार, २ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर	1.35K
तर ब्रह्मचर्य भनेको सहज हुनुपर्छ, स्वाभाविक हुनुपर्छ । मनमा कामवासनाको भाव नउठ्नुचाहिँ ब्रह्मचर्य हो । तर, मनमा चाहिँ वासनाको थुप्रो भाव छ ।
अर्को ब्रह्मको आचरण जहिले पनि समान छ । सर्वहिताय छ, यसले मेरो पूजा गर्छ, अर्घ दिन्छ, यसलाई मात्र प्रकाश दिनुपर्छ र यो चाहिँ मेरो पूजा गर्दैन, यसले चाहिँ कहिल्यै पूजा गर्दैन, यसलाई चाहिँ प्रकाश कम दिनुपर्छ भन्छ र ?
मेरो आफ्नो इच्छाले एउटा मानिस बनाउन सक्छु र ? सक्दिनँ न छोरा न छोरी बनाउन सक्छु ।